CHU ANOSIALA SY HJRB: Nahazo fanampiana ara-pitaovana avy amin’ny Fondation Axian – Madatopinfo
Raha ny tarehimarika farany navoakan’ny Foibem-pibaikoana momba ny Covid-19 (CCO) omaly alatsinainy 3 Aogositra, miisa 84 ireo olona voan’ny Covid-19 manana fahasarotana mbola manaraka fitsaboana ankehitriny ary ny ankamaroan’izy ireo dia fantatra fa eto Analamanga avokoa. Ho fanohanana sy fiaraha-mientana amin’ny fiadiana atao amin’ity valan’aretina ity eto amintsika, dia nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an’ny Ivon-toeram-pitsaboana mandray an-tanana sy mikarakara ireo mararin’ny coronavirus ny Fondation Axian. Ny 15 Jolay lasa teo mantsy dia nitondra ny anjara birikiny ho an’ny CHU Anosiala izy ireo ka « stabilisateur de tension électrique » izany. Io fitaovana izay tena ilain’ny hopitaly tokoa amin’izao fotoana izao indrindra amin’ny fiovaovan’ny herinaratra any an-toerana. Marary miisa 100 moa raisin’ny CHU Anosiala no hisitraka izany. Raha ny fantatra, niara-nisalahy tamin’ny Fondation Axian tamin’izany ny Entreprise Électricité de Madagascar izay nanampy teo amin’ny lafiny ara-teknika.
Tsy adinon’ny Fondation Axian ihany koa ny tao amin’ny Hopital Joseph Raseta Befelatanana (HJRB) indrindra amin’izao toe-draharaha sarotra ara-pahasalamana lalovan’ny firenentsika izao. Nahazo tavoahangina oxygène fanampiny miisa 15 mantsy ny HJRB izay afaka ampiasaina mandritra ny 24 ora amin’ny 24 ora, 7 andro amin’ny fito andro. Hahazo tombony amin’ity ireo olona mararin’ny coronavirus manana fahasarotana raisina an-tanana eo anivon’ity hopitaly ity. Zava-dehibe ho an’ny HJRB araka izany ny fisian’ireo tavoahangina oxygène ireo satria azo fenoina amin’ny alalan’ilay atao hoe « générateur d’oxygène » eo anivon’ny hopitaly ihany izy ireo.
Raha tsiahivina, tsy vao voalohany akory no nisy ny fanohanana nataon’ny Fondation Axian nandritra ny nahatongavan’ny valan’aretina Covid-19 teto amintsika fa efa nisy teo aloha. Ohatra goavana tamin’izany ny fanomezany fanafody hydroxychloroquine miisa 6.000 boaty ho an’ny fitondrana Malagasy ny volana Aprily lasa teo.